အရေတွန့်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ | Beauty MM
အသက်အရွယ် ရလာတဲ့ သူတွေအတော်များများဟာ မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်း တွေေ ပ်ါလာလို့ ၊ အသားအရေ ပျော့တွဲလာလို့ မှန်မကြည့်ချင်တော့အောင် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် ။ မျက်နှာ ၊ လည်ပင်း ၊ နဲ့ လက် တွေမှာ ဖြစ်တာက ပိုထင်ရှားပါတယ် ။ အရေးအကြောင်း ဖြစ်ရခြင်းက အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းရဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါဘဲ ။ အရေပြားက တွယ်ဆက်တစ်ရှုး (Connective Tissue) မှာ ကော်လာဂျင် (Collagen) နဲ့ အီလတ်စတင် (Elastin) ဓါတ်များ ပျက်စီး လျော့ပါးလာတဲ့အတွက် အရေပြား ရှုံ့ တွဲကျ လာခြင်း ဖြစ်တာပါ ။ အသက်ရလာတော့ ဖိုက်ဘရိုဘလပ် ဆဲလ် ( Fibroblasts ) များ ယိုယွင်းလာလို့ Collagen နဲ့ Elastin ထုတ်လုပ်မှု လျော့သွားလို့ ပါ ။
*အရွယ်မတိုင်မီ အရေပြား လျော့တွဲ ခြင်းကတော့ နေပူခံရလွန်းခြင်း ၊ရေကြမ်း လေကြမ်း မြေကြမ်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ရခြင်း ၊ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊ စိတ်ထိစီးခြင်း ၊ ရောဂါကြောင့် ပိန်ခြုံးခြင်း ၊ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ခြင်း ၊ ဗီတာမင် အီးဓါတ် ချို့ တဲ့ခြင်း နဲ့ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ။
#ပြုပြင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့_နည်းလမ်းများ ကို တင်ပြပါ့မယ် ။
*သံလွင်ဆီမှာ ဗီတာမင် A , ဗီတာမင် E ကြွယ်ဝပါတယ် ။ ၎င်း ဗီတာမင်များက ဓါတ်တိုးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိတာကြောင့်
အရေပြား ပျက်ဆီးခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပါတယ် ။
– သံလွင်ဆီ နဲ့ အရေပြားကို မှန်မှန်နှိပ်နယ်ပေးပါက အရေပြားဆဲလ်များ ပွားများ ရှင်သန်စေပါတယ် ။
– သံလွင်ဆီ ၊ ပျားရည် နဲ့ အလှဆီ ( Glycerin ) အနည်းငယ်စီ တို့ ကို သမအောင်မွှေပြီး တနေ့ ၂ ကြိမ် အရေပြားကို လိမ်းကျံ နှိပ်နယ် ပေးပါက အသားအရေ တင်းရင်းလာစေပါတယ် ။
2 . #ရှားစောင်းလက်ပတ်
*ရှားစောင်းလက်ပတ် တွင် မဲလစ်အက်ဆစ် (Malic Acid) ပါရှိပါတယ် ။ ၎င်း အက်ဆစ်က အသားအရေ တင်းရင်းစေပါတယ် ။ အရေးအကြောင်း ပျောက်စေပါတယ် ။
– ရှားစောင်းလက်ပတ် အနှစ် ( Gel ) လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကို မျက်နှာမှာ လိမ်းကျံပြီး မနစ် ၂၀ မျှ ထားပြီးမှာ ရေနွေးနွေး နှင့် မျက်နှာသစ်ပေးရပါမယ် ။
– ရှားစောင်းလက်ပတ် အနှစ် ကို ဗီတာမင် E နှင့် သမအောင် မွှေပြီး လိမ်းလည်း ရပါတယ် ။
နာရီဝက်ထားပြီး ရေနွေးနွေး နှင့် မျက်နှာ သစ်ရပါမယ် ။
3 . #ဂျင်း
*ဂျင်းတွင် ဓါတ်တိုးကာကွယ်ပစ္စည်းများပါ ပါတယ် ။ အရေပြားမှ အလတ်စတင် ( Elastin ) ပျက်ဆီးခြင်း ကို တာဆီးနိုင်သဖြင့် အရေပြား တင်းရင်းခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ် ။ခြစ်ထားသော ဂျင်း အနည်းငယ် ကို ပျားရည် ၁ ဇွန်း နှင့် ရော၍ မနက်တိုင်း စားပေးရပါတယ် ။ ဂျင်း ရေနွေးကြမ်း တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်နိုင်ပါတယ် ။
4 . #ငှက်ပျောသီး
*ငှက်ပျောသီးတွင် ဗီတာမင် ၊ သတ္တုဓါတ် ၊ ဓါတ်တိုးကာကွယ်ပစ္စည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ် ။
– ငှက်ပျောသီးမှည့်မှည့် ၂ လုံးကို စိစိပါအောင် ချေပါ ။ တွန့်နေသော အရေပြားပေါ် လိမ်းကျံပါ ။ နာရီ ၀က်ထားပြီးမှ ရေနွေးနွေး နှင့် မျက်နှာ သစ်ရပါမယ် ။
– ငှက်ပျောသီးမှည့် ၁ လုံး ၊ ထောပတ်သီး ၊ ပျားရည် အနည်းငယ် တိုကို ရောချေပါ ။ တွန့် သော အရေပြားပေါ် လိမ်းကျံပါ ။ မိနစ် ၂၀ ထားပြီး မှ မျက်နှာ သစ်ပါ ။ ဤနည်းများကို တပတ် ၂ ကြိမ်လုပ်ပါက အရေးအကြောင်းများ ပျောက်၍ နုပျိုလာစေပါတယ် ။
5 . #မုန်လာဥ၀ါ
*မုန်လာဥ၀ါ တွင် ဗီတာတာမင် A များစွာပါဝင်ပါတယ် ။ ဗီတာမင် A က ကော်လာဂျင် ( Collagen ) ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးပါတယ် ။ ထို့ ကြောင့် အသားအရေ ချောမွေ့ စေပါတယ် ။
– မုန်လာဥ၀ါ ၂ လုံးကို နူးအိအောင် ပြုတ်ပါ ။ ပျားရည် သင့်အောင်ထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ ။ ၎င်း အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ် လိမ်းကျံပါ ။ နာရီဝက်ထားပြီးမှာ ရေနွေးနွေး နှင့် မျက်နှာသစ်ရပါမယ် ။
– မုန်လာဥ၀ါ ၁ လုံးကို မွှေစက်နှင့် ဖျော်၍ ၊ ပျားရည် ဆတူ ထဲ့ မွှေ ပါ ။ မနက် ၁ ကြိမ် ည ၁ကြိမ် လိမ်းပါ ။
၁၀ မိနစ်ထားပြီး မျက်နှာသစ်ပါ ။
– မုန်လာဥ၀ါ အစိမ်းလည်း စားနိုင်ပါတယ် ။
6 . #လီမွန်ဖျော်ရည်
– *လီမွန်ဖျော်ရည်သည် စီးထရစ်အက်ဆစ် (Citric Acid) ကြွယ်ဝပါတယ် ။ အရေပြားမှ ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ် ။
– မျက်နှာသစ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ အရေးအကြောင်းများ ၊ အတွန့်များ ၊ အမည်းစက်များ ကို ပျောက်စေပါတယ် ။
7 . #နာနတ်သီး
*နာနတ်သီးတွင်ပါသော အင်ဇိုင်းက အသားအရေ တင်းအားကို ကောင်းစေသလို ၊ အရေပြား ခြောက်သွေ့ ခြင်းကိုလည်း ပျောက်စေပါတယ် ။ ဆဲလ်သေများကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ် ။ နာနတ်သီးတွင် ဖိုင်ဘာဓါတ် ၊ ဓါတ်တိုးကာကွယ်ဓါတ် ၊ ဗီတာမင်တို့ လည်းပါဝင်သဖြင့် အသားအရေ စိုပြေစေပါတယ် ။
– လတ်ဆတ်သော နာနတ်သီး နှင့် အရေပြားကို ပွတ်ပေးရပါမယ် ။ မိနစ် ၂၀ ကြာမှ ဆေးကြောရပါမယ် ။
– အရည်ညှစ်ပြီး အသားကို လိမ်းကျံနိုင်ပါတယ် ။ နေ့ စဉ် လိမ်းကျံနိုင်ပါတယ် ။ ၅ မိနစ်မျှ ထားပြီး ဆေးကြောနိုင်ပါမယ် ။
8 . #ရေ
*အလွယ်နည်းကတော့ ရေသောက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ရေသောက်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် ရေဓါတ်ပြည့်ဝစေပြီး ၊ အသားအရေ စိုပြေစေပါတယ် ။
*ဇရာ ကို မတားနိုင်တာမှန်ပေမယ့် သတိလေးနဲ့ ထိန်းသိမ်းရင်း လှပစွာ အိုမင်းနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
လေဒီလေးတို့ သွေးအမျိုးအစားအလိုက်ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အလှအပရေးရာPrev post
လက်ဖက်ခြောက်ရှိရုံနဲ့ ဝိတ်ချနိုင်မယ့် ရေနွေးကြမ်းပြုလုပ်နည်း (၃)မျိုးNext post
လက်ဖက်ခြောက်ရှိရုံနဲ့ ဝိတ်ချနိုင်မယ့် ရေနွေးကြမ်းပြုလုပ်နည်း (၃)မျိုး
အသားအရေပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် ကြက်ဥအကာသုံးပြီး ပေါင်းတင်နည်း (၆)မျိုး
အမျိုးသားတွေလည်း မျက်နှာအသားအရေကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်
အစားအစာတွေကို (၂) မိနစ်ခန့် အနံ့ခံပေးခြင်းက အစားစားချင်စိတ်ကို တားဆီးပေးနိုင်